Iindaba - Izixhobo zeNoveli zaseGenzon, eziya “ngo-2019 weSuqian Green Industry Expo”
Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Septemba, umsitho wengingqi we-2019 I-Suqian Green Industry Expo yabanjelwa ukuvulwa kweziko le-Suqian Exhibition. Umxholo wale Green Fair "luhlaza, ukudityaniswa kunye nokutsiba", Gxila kwimizi-mveliso eluhlaza kunye noqoqosho lwendalo ukwenza iingxoxo zoqoqosho nezorhwebo, ukukhuthaza ukudityaniswa kwendalo yesayensi kunye nobuchwephesha kunye nophuhliso lwemizi-mveliso, kunye nokuqokelela ngakumbi ubungakanani obutsha bohlaza Uphuhliso lwe-leapfrog
Izixhobo zeNovel ye-Genzon, njengeshishini lendawo elaziwayo, lazisa iimveliso zalo zethekhinoloji eziphambili kumboniso. Izixhobo zeNovel yeNoGenz ikwabonakalisa uluhlu lwemveliso ephambili: Ifilimu esisiseko sokuPakisha, ifilimu esisiseko sokukhuselwa, ifilimu esisiseko ekhuselayo, ifilimu yesiseko seBronzing, ifilimu yokudlulisela isiseko sefilimu kunye nefilimu yesiseko seLurex. Iziko latsala iingcali zeshishini kunye nabantu abanomdla.
I-2019 I-Suqian Green Industry Expo yeyona ndawo inkulu kwaye inesona siganeko sinefuthe kwi-Suqian, kungekuphela kweqonga elibalulekileyo lokuqinisa uqoqosho, urhwebo kunye nentsebenziswano yezemizi-mveliso, kodwa kukwakho neqonga losasazo lohlobo. Izinto ze-Novel zeGenzon ezizimase umsitho, aziphuculi nje ukuthandwa kwangaphandle, kodwa zandisa nefuthe lophawu.